Fanasitranana Mahagaga. Nikolaitanisma. BNL Ministries - mg07
Fanasitranana Mahagaga. Nikolaitanisma.
Ahoana ary ny fomba ahazoako fanasitranana?
"Moa ve ireo fanampin'anarana fiton'i Jehovah misy hifandraisany amin'i Jesosy?" F.F. Bosworth - ENY
Tsy misy olona afaka manasitrana olona, eny fa na dia ny Dokotera aza.
Ny fanasitranana rehetra dia avy amin'Andriamanitra.
Raha teto izao Jesosy, dia tsy afaka nanasitrana anao Izy - satria efa nataony io, Izy no efa nanao izany, tamin’Izy maty tao Kalvary. Mitaky finoana io.
Ny fanasitranana Masina dia hita eny amin’ny hafatra rehetra eny. Izao no santionany amin'ny hafatra sasany, natao mba hananganana finoana hitondra fanasitranana ho anao.
Ary noho izany ary ho an’ny lehilahy raha midina atỳ izy milaza fa manana hery hanasitranana ny marary, dia tsy fantany ny Soratra Masina. .. Ny fanasitranana Masina dia miankina amin'ny asa vitan’i Jesosy Kristy tao Kalvary. Tena asa vita. Ny famonjena dia toy izany koa. Tsy sitrana ianao herintaona lasa izay, roa taona lasa izay, na hoe voavonjy. Tsy voavonjy tamin'ny herinandro lasa ianao, na efa-polo taona lasa. Fa voavonjy ianao sivinjato sy arivo taona lasa izay, rehefa maty i Jesosy tao Kalvary. Fa nanaiky ny famelan-keloka ianao taona maro lasa izay, na alina maromaro lasa izay, na ny toy izany. Toy izany ihany koa: "Izy dia voalefona noho ny fahadisoantsika, ny dian-kapoka taminy no nahasitrana antsika." Izany hoe fotoana efa lasa.
William Branham - The Great Commission 57-0804A (Anglisy)
Tsy fahombiazana ny Fivavahana
mandeha amin’ny ambaratongany.
Ilay teny hoe "Fiangonana" dia midika hoe ireo nantsoina. Inona ary no niantsoana antsika?
Ny Exodosy voalohany dia ny niantsoan’i Mosesy firenena iray avy ao anatina firenena.
Ny Exodosy faharoa dia i Kristy niantso ny Fiangonana iray avy ao anaty Fivavahana.
Ny Exodosy fahatelo dia i Kristy miantso ny Ampakarina avy ao anatin'ny Fiangonana iray.
Ny teny hoe "Nikolaita" dia fikambanan’ny teny roa avy amin'ny teny grika "Niko" mba handresy, ary "Laika" ny fiangonana ( ny olona ). Nikolaitanisma no toerana nanombohan’ny ny fiangonana nofehezin’ny olona, fa tsy ny Fanahin'Andriamanitra.
Izany no voalaza ao amin'ny Apokalypsy Toko 2 sy 3, izay nanoratan’ny Tompo taratasy ho an'ny fiangonana fito tany Asia.
[Jereo Ny Taompiangonana Fito].
Ireo taratasy ireo dia ny faminaniana, izay mampiseho ny toetry ny vanimpotoana ho avy. Ny nanakianan’Andriamanitra ny fiangonana, dia satria fa efa niala tamin’ny "fitiavany voalohany" Navelany hiditra tao ny Nikolaitanisma. Izany nanomboka tamin’ ny teny hoe, ny asa, dia lasa foto-pampianarana, ary farany lasa olona - dia ny mpaminany sandoka.
Tena saro-takarina satria niatomboka fotsiny tamin’ny hoe "hevitra". Izany no nampianarin'ireo izay antsoina hoe "apostoly", na dia diso aza izy ireo. Eo no ahitantsika Izy dia miresaka ny fiangonana. Taty aoriana ao amin’ ireo taratasy ireo, Andriamanitra dia miantso azy hoe "Fiangonan'i Satana", ary hoy Andriamanitra hoe "mankahala" izany Izy. Tena mafy izany teny izany, izay tsy dia matetika ampiasaina ao amin'ny Soratra Masina.
Rehefa misy fanahy hafa te hanapaka eo amin'ny fiainanao, - izay no halan'Andriamanitra, satria tiany Izy no hanapaka eo amin'ny fiainanao. Manana safidy isika, na izany aza, mba ho amin'ny fahafahana ao amin’ny Fanahy Masina, fa tsy ny fanandevozanan’ny olona.
60-0911E Five Definite Identifications of the Church of the Living God. - William Branham
62-1111E Why I am against Organised Religion. - William Branham
Ny Taranaky ny Nikolaitanisma.
Ny Fotopampianaran'ny Nikolaita.
Ilay Rahona tsy azo
Toko 11 - Ny Rahona.